Telefishinka Iran oo beddelay astaanta Manchester United kulankii xalay ee PSG maadaama ay mamnuuc ka tahay dalkaasi! – Gool FM
(Tehran) 13 Feb 2019. Inkastoo kulankii xalay ee Manchester United iyo PSG ee ka tirsanaa UEFA Champions League laga daawaday dhammaan dalalka Caalamka iyadoo dhammaantoodna ay ciyaarta u tebinayeen sida ay tahay ayaa haddana waddanka Iran waxaa xalay kulankaa looga tebiyay si ka duwan qaabkaasi.
Telefishinka waddanka Iran oo tebinayay kulankii xalay ee PSG ay 2-0 kaga adkaatay Manchester United ee ka dhacay Old Trafford ayaa waxa uu wax ka beddelay astaanta caanka ah ee Manchester United, iyadoo astaanta laga siibay Shaydaanka gaduudan ee waranka sita ee bartamaha kaga yaalla.
Wargeyska ‘Metro’ ee ka soo baxa Ingiriiska ayaa xusay in maadaama astaantaasi Shaydaanka ay mamnuuc ka tahay Iran waxaa Telefishinka qaranku uu barta dhexe ee calaamadda Man United ku beddelay saddex diilin oo huruud ah.
Dadka isticmaala baraha bulshada ayaa aad ula yaabay in astaan dhan oo ay kooxi leedahay si kale loo beddelo.
Ma ahan markii ugu horreysay ee Telefishinnada Iran ay beddelaan astaamaha gaarka ah ee lagu yaqaanno kooxaha caalamka, iyadoo horey ay sidan oo kale u beddeleen qayb ka mid ah calaamadda kooxda Roma ee Talyaaniga oo ay qaybta sare kaga yaal sawirka walaallaha Romulus iyo Remus oo nuugaya naaso uubato ama Yey.